Tri Trang Beach ~ Journey-Assist - Torapasika any Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Tri Trang Beach
Topimaso amin'ny Tri Trang Beach
Beach Trang telo amin'ny sarintany
Weather on Tri Trang Beach
Saripika sy horonan-tsary amin'ny fitsangantsanganana Tri Trang
Hotely akaikin'ny Beach Tri Trang
Hevitra momba ny Tri Trang Beach (valin'ny Google)
Hevitra momba ny Tri Trang Beach (Tripadvisor.ru)
Beach Tri Trang (Pantai Tri Trang). Overview
Mifindra atsimo avy any Patong Beach tsy manaraka ny làlan-dàlana lehibe (izay mankany amin'ny Karon), fa manaraka ny morontsiraka, amin'ny alàlan'ny havoana iray ihany no ahafahanao mankamin'ny Three Trang. Io amoron-dranomasina io dia akaikin'ny hotely mitovy anarana. Eo akaikiny dia misy lalana miditra amin'ny ranomasina - lalana midina. Vitsy ny olona eto, noho izany dia milamina ny tora-pasika, milamina. Ny fiakaran'ny halaliny eto dia somary miadana. Tsy azo atao ny milomano amin'ny rano ambany. Fa amin'ny rano avo dia afaka milomano tsara.
Ny tora-pasika io dia manana halavitry ny antsasaky ny kilometatra. Fasika miaraka amin'ny vatosoa kely matetika (ho hita eo amin'ny sary etsy ambany). Malalaka ny rano, saingy tsy tony ny ambany, misy vato lehibe sy haran-dranomasina taloha. Satria mila mitandrina be ianao.
Ary rehefa maraina sy hariva dia matetika ny trondro no misambotra trondro miaraka amin'ny haratony eo afovoan'ny mpilomano.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny tora-pasika no tsidihin'ny mpizahatany Rosiana misimisy kokoa mandositra ny Patong miroborobo. Amin'ny vanim-potoana any, rehefa misy onja be ao Patong, mpizahantany no mivory eto mba tony hitady rano tony mba "hilomano".
Tsy fahita firy ny onja ary tena tony ny ranomasina.
Ny fotodrafitrasa dia mifanandrify amin'ny tora-pasika. Misy mpivarotra roa (eo amin'ny lakan'ny hôpitaly lehibe, ary manakaiky ny fitoerana fiantsonan'ny bisikileta). Misy trano fidiovana. Ao ny trano fisotroana kafe, trano fisakafoanana, ary tranofiara misy varotra miaraka amin'ny voanio-voanio. Azo alaina ny fiara, fa tsy akaikin'ny tora-pasika.
Tsy misy seza fasika, satria tsy misy elo. Fa misy alokaloka ampy avy amin'ny hazo. Misy koa ny fihodinana maromaro, ary matetika izy ireo no tonga haka sary ho azy ireo.
Vidiny ao amin'ny Tri Trang Beach
1500 baht ao anatin'ny 30 minitra (1 olona) ary 2000 baht ao anatin'ny 30 minitra (2 olona). Adiny roa dia lafo roa. Fa kosa tokony hojerenao ny fisokafan'ny vahoaka Thai mba tsy hifanaraka. Ary raha tsy misy fangatahana amin'izao fotoana izao dia azo antoka fa mahomby ianao.
Coconut - 60 baht
Rano 0.5 - 20 baht
Ny vidin'ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana dia tsotra amin'ny Phuket
Indraindray koa ny elefanta ho tonga eto. Saripika miaraka amin'izy ireo (mitaingina elefanta iray) dia mitentina 700 ka hatramin'ny 1000 baht (arakaraka ny vanim-potoana).
Amin'ny vanim-potoana ambony, ny kayak dia mazoto eto koa. Afaka manandrana fanandramana eto ianao. Ny vidiny dia mitovy amin'ny any Patong mpifanolo-bodirindrina, fa ny vahoaka Thailandey misokatra malalaka kokoa amin'ny fifanakalozana.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/mMU6bHvui2Uw9FCN9
Tri Trang Beach amin'ny sari-tany
Weather in Tri Trang Beach
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany ahitanao ny toetrandro ankehitriny eo amoron-dranomasina Tri Trang. Ao amin'ny faran'ny fidirana ny zoro dia fandaharam-potoana ahafahanao mandroso, amin'ny alàlan'ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Saripika sy lahatsary Tri Trang Beach
Ny hevitra ao amin'ny Tri Trang Beach (Hevitra momba ny Google)
Ny tsikaritra momba ny Tri Trang Beach (Tripadvisor.ru)
Raha reraka any Patong ianao ary kamo loatra ka lasa lavitra mitady lalana amoron-dranomasina hafa, dia ity torapasika ity no tena fialana sasatra. Misy rano milamina ary vitsy ny olona (ny volana Aogositra). Ny kafe dia manolotra sakafo matsiro ary somary ambany kely ny vidiny any Patong.